ရှညောသား: အညာက ဟင်းချက်နည်းလေးများ(၃)
ပြည်ပန်းညိုဆိုပေမဲ့ သူ့ပန်းကတော့ အ၀ါရောင်လေးတွေပါ။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ အရွက်ကို ဟင်းချိုချက်စားတယ်။ ပဲကြီးဟင်းချိုမှာ ထည့်ချက်ရင် စားလို့ကောင်းတယ်။ အနံ့ကတော့ မကြိုက်တဲ့သူ ဆိုရင် နဲနဲ နံမယ်ထင်တယ်။ အနံ့က အလွန်ကြီးတော့ မပြင်ပါဘူး။ သူ့အတိုင်း ဟင်းချိုချက်စားရင်လည်း သောက်လို့ကောင်းတယ်။ ပဲဟင်းနဲ့ဆိုတော့ တစ်မျိုးလေးပေါ့။ အရွက်နုကို ပြုတ်ပြီးတော့ အတို့အမြှုပ်အဖြစ် လုပ်စားရင်လည်း အဆင်ပြေတာပါပဲ။
ပြည်ပန်းညိုပင်(photo from google)
ထန်းသီးဟင်း အကြောင်းကို ထန်းပင်အကြောင်းရေးတုန်းက ရေးခဲ့ဘူးပါတယ်။ အခုနဲနဲပြန်ရေးလိုက် ပါအုံးမယ်။ အညာမှာ ထန်းလျက်ပေါတာတော့ အားလုံးသိကြမှာပါနော်။ ထန်းပင်ပေါတော့ ထန်းသီးလည်း မရှားဘူးပေါ့။ ထန်းသီးဟင်းကိုတော့ စားဖူးသူ နည်းပါလိမ့်မယ်။ ထန်းသီးဆံ နုနုကို အချဉ်လေးနဲ့ ချက်စားလို့ ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာကတော့ ထန်းသီးလက်နဲ့ကော်လို့ ရတဲ့အနေအထားကို ချက်စားတာပါ။ အရမ်းမာသွားရင်လည်း ချက်စားလို့မကောင်းပါဘူး။ အဲ့ဒီထန်းသီးကို မန်ကျည်းရွက်နု နဲ့ရောပြီး အရေစပ်စပ်လေးနဲ့ ငရုတ်သီးစပ်ချက်စားရင် အတော်ကို ကောင်းပါတယ်။ ထန်းသီးက ချိုတတ်လို့ အချဉ်လေးနဲ့ချက်စားမှ အဆင်ပြေပါတယ်။ အချဉ်ကိုလည်း ကြိုက်နှစ်သက်ရာ သုံးနိုင်ပါတယ်။ သရက်သီး၊ ချဉ်ပေါင်သီး စတဲ့အချဉ်တွေနဲ့လည်း ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာက ထန်းသီးပေါ်ချိန်ဆိုရင် မန်ကျည်းရွက်ကလည်း နုတဲ့အချိန်မို့ မန်ကျည်းရွက်နဲ့ ချက်စားတာက များတယ်။ မန်ကျည်းရွက်နဲ့ကလည်း ပိုပြီးတော့ လိုက်ဖက်ပါတယ်။
ဒီထန်းသီးကတော့ ဒီအတိုင်းစားတာအဆင်ပြေတယ်(photo from google)
မှတ်မိပါသေးတယ်။ ရွာမှာတုန်းက ကျွန်တော်တို့အိမ်ကို တခြားရွာက ဧည့်သည်တစ်ယောက် ရောက်လာတာ။ အချိန်ကလည်း ထမင်းစားချိန်ရောက်နေပြီဆိုတော့ အမေက ရှိတဲ့ဟင်းလေးနဲ့ပဲ ထမင်းကျွေးဖို့အတွက် ပြင်ဆင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီနေ့က အိမ်မှာ ပဲဟင်းချိုနဲ့ ထန်းသီးဟင်းချက်ထားတော့ အမေက ဧည့်လာစောင်လာ ထားတဲ့ ငါးပိကောင်လေးကို ကင်ပြီး ထမင်းခူးကျွေးပါတယ်။ ဧည့်သည်ကလည်း အဝေးကလာရတော့ ဆာနေဟန်တူပါရဲ့ ထမင်းစားတာ ခေါင်းကို မဖော်ပါဘူး။ သူအနှိုက်များတာက ထန်းသီးနဲ့မန်ကျည်းရွက် ချက်ထားတဲ့ ဟင်းခွက်ကိုပါ။ တော်တော်လေး စားလို့ကောင်းဟန်တူပါတယ်။ မျက်နှာမှာလဲ ချွေးတွေကို သီးလို့။ အမေကတော့ ဟင်းမကောင်းလို့ အားနာနေပေမဲ့ ဧည့်သည်က အားရပါးရ စားတာကို မြင်ရတော့ ၀မ်းသာနေတယ်။ ထမင်းစားပြီးတော့မှ သူက ဟင်းကိုမေးတယ်။ စားသာစားလိုက်တယ် ဘာဟင်းမှန်း မသိဘူးတဲ့။ အမေက ထန်းသီးဟင်းဆိုတာကို ပြောပြတော့မှ အံသြသွားတယ်။ ကျုပ်တို့ရွာမှာတော့ ထန်းသီးကို ဟင်းချက်စားရမှန်း မသိကြပါဘူးဆိုပြီး အမေ့ဆီက ဟင်းချက်နည်းလေးပါ တောင်းသွားတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေတွေလည်း အညာကိုရောက်လို့ ကြုံကြိုက်ရင် ထန်းသီးဟင်း ချက်ကျွေးခိုင်းနော်။ တကယ်စားလို့ ကောင်းတယ်ဗျ။
မန်ကျည်းရွက်နုနု(photo from google)
ဒီဟင်းကတော့ အမဲသားစားသူတွေအတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။ ရွာတွေမှာ အသားက အမြဲတမ်းမရတော့ ကြုံကြိုက်တဲ့ အခါ ၀ယ်ပြီးတော့ အခြောက်လှန်းထားတတ်တယ်။ အဆင်သင့်ရှိတော့ ဧည့်သည်လာတဲ့အခါ အရေးတကြီးလိုရင် အဆင်ပြေတာပေါ့။ အဲ့ဒီအမဲခြောက်ကို ကင်ပဲစားစား၊ ကြော်စားစား၊ ဟင်းချက်စားစား အဆင်ပြေပါတယ်။ ဟင်းချက်ရင်တော့ အိမ်သားအားလုံးအတွက် စားနိုင်တာပေါ့နော်။ အမဲခြောက်ကို ခရမ်းချဉ်သီးလေးနဲနဲရယ် မန်ကျည်းရွက်လေးနဲ့ ရောပြီး နယ်စားလို့ရအောင် အရည်လေးနဲ့ ချက်ရင် စားလို့ကောင်းပါတယ်။ အမဲခြောက်ကို အရင်နူးအောင် ချက်ပြီးမှ မန်ကျည်ရွက်ထည့်လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ အရည်အနည်းအများကတော့ စားမည့်လူအရေအတွက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ ချက်ပေါ့ဗျာ။ ကျနော်ဆို အိမ်မှာ ဟင်းချက်ရင် ရေနွေးနဲ့ ဆားကို အမြဲတမ်းအသင့်ပြင်ထားတယ်။ မိသားစုကများတော့ စားနေရင်း ဟင်းက အခြေအနေ မလှရင် ပွားလို့ရအောင်လိုလေ….ဟဲ…ဟဲ…
ပေါက်ပန်းဖြူအရွက်နဲ့အဖူး(photo from google)
ပေါက်ပန်းဖြူပင်ကိုတော့သိကြမှာပါနော်။ မီးဖိုချောင်အတွက် အတော်လေးအသုံးဝင်တဲ့ အပင်ပါ။ အရွက်ကစပြီး အပွင့်၊ အဖူး၊ အသီး စတာတွေအထိ အကုန်ချက်စား၊ တို့မြှုပ်စားလို့ရတယ်ဗျ။ အိမ်မှာ ပေါက်ပန်းဖြူ တစ်ပင်လောက် စိုက်ထားရင် ဟင်းအတွက်က ပူစရာမလိုရလောက်အောင်ပဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ ပေါက်ပန်းဖြူဆိုရင် ငါးပိချက်နဲ့မှ အကြိုက်ဆုံးပဲ။ ပေါက်ပန်းဖြူအရွက်၊ အဖူးအပွင့်၊ အသီးအကုန်လုံးကို ပြုတ်ပြီး တော့ ငါးပိချက်လေးနဲ့ တို့စားရင် တခြားဟင်းမပါဘဲ စားလို့ဖြစ်တယ်ဗျို့။ နောက်ပြီး တခြားအရွက်တွေနဲ့လည်း တွဲပြီးတော့ အချဉ်ရည် ဟင်းချက်စားနိုင်သေးတယ်။ ပေါက်ပန်းဖြူပွင့်ကို မန်ကျည်းသီးစိမ်းလေးနဲ့ ချက်ရင်လည်း စားကောင်းတယ်။ အဖူး၊အပွင့်၊အရွက်၊အသီးနု ရောရာကို ချဉ်ပေါင်ရွက်၊ ကန်စွန်းရွက် စတာတွေနဲ့ အချဉ်ရည်သောက် ချက်ရင်လည်း အတော်ကောင်းတယ်။
ပေါက်ပန်းဖြူ အပွင့်နဲ့ အသီး(photo from google)
ငါးပိချက် ချက်တာလဲ လွယ်လွယ်လေးပဲဗျ။ တောချက်ကို ပြောတာနော် အဟဲ။ ပွက်ရင် ကျက်တာပဲ။ ချက်တာလေးက အရင်ဆုံး ကြက်သွန်နီနှစ်လုံးလောက်ကို ပါးပါးလှီးပြီး ဆီလေးနဲနဲနဲ့ လှိမ့်လိုက်ပါ။ ကြက်သွန်နွမ်းသွားရင် ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ရောထောင်းထားတဲ့ ငရုတ်သီးကို ထည့်ပြီးတော့ မွှေးလာအောင်ရောပြီး လှိမ့်။ ကြော်တာပါပဲ။ ဆီများများသုံးရင်တော့ ကြော်တယ်ပေါ့။ အခုက ဆီနဲနဲပဲ ထည့်လို့ လှိမ့်တယ်လို့ ပြောတာ။ ငရုတ်သီးနံ့လေး မွှေးလာရင် စိမ်းစားပဲခေါ်လား၊ ကျက်စားပဲခေါ်လားမသိ အဲ့ဒီငါးပိကို ရေနဲ့အရည်ဖျော်ပြီး အစောကကြော်တဲ့အထဲကို လောင်းထည့်လိုက်ပါ။ ငါးပိရည် ထည့်ပြီးလို့ အိုးပွက်လာရင် ငါးပိချက်ရပါပြီ။ ကျွန်တော်ကတော့ အိမ်မှာတုန်းက အမေချက်ကျွေးတာ စားနေကျမို့ ပေါက်ပန်းဖြူကို ငါးပိချက်နဲ့ပိုပြီး ကြိုက်ပါတယ်။ ငါးပိချက်နည်းလေးကို စမ်းပြီးချက်စားကြည့်ဗျာ။ အတော် စားလို့ကောင်းတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ပုစွန်ခြောက် တွေမပါဘဲကို ထမင်းမြိန်ပါတယ်။
ဆူးတွေများများနဲ့ အပင်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ရွာမှာတော့ ရွာခြံစည်းရိုးအဖြစ်စိုက်ထားတယ်။ ဆူးက အဆိပ်ရှိတယ်။ မြင်ဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဆူးစူးရင်တော့ အတော်လေးနာတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရွာမှာတော့ ပေါတယ်ဗျ။ သူလည်း မိုးရာသီမှာ အဖူးတွေထွက်တယ်။ အဲ့ဒီအဖူးတွေကို ချိုးပြီးတော့ ဟင်းချက်စားလို့ကောင်းတယ်။ သူကလည်း အရသာ တစ်မျိုးပဲ။ ပဒုံမာဖူးကို ၀ါးရင် ချွဲချွဲလေးနဲ့ စားရတာ တစ်မျိုးလေးပဲ။ အများဆုံး စားဖူးတာတော့ ချဉ်ပေါင်ရွက်နဲ့ ချက်စားတာများတယ်။ အထဲမှာပါတဲ့ ၀တ်မှုံတံလေးတွေကို ပြောင်အောင် သင်ပြီးတော့ အခြမ်းလေးတွေ ခွဲပြီးချဉ်ပေါင်ရွက်နဲ့ တစ်ခါထဲ လုံးချက်ယုံပါပဲ။ အချဉ်ရည် သောက်ထဲမှာလဲ ထည့်ချက်ရင် စားလို့ကောင်းပါတယ်။ အဖူးနဲ့ အပွင့်ကို နှစ်မျိုးစလုံး သုံးလို့ရတယ်။ ကြုံကြိုက်ခဲ့ရင် သိထားတော့ ချက်စားလို့ရတာပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ ရွာမှာတော့ အဲ့ဒီအပွင့်တွေ လှိုင်လှိုင်ပွင့်ရင် မိုးကုန်ပြီလို့ တွက်ကြတယ်။ ဟင်းစားတင် မဟုတ်ဘူး မိုးအချက်ပြ အပင်လည်း ဖြစ်တာပေါ့။
ကန်စွန်းရွက်အရိုးနီလေးတွေ။ လယ်ထဲမှာ အများဆုံးပေါက်တယ်။ သင်္ကြန်ပြီးလို့ မိုးတစ်မိုးလောက် ရွာပြီးရင် လယ်ရိုးကျွတ်တွေထဲမှာ ကန်စွန်ရိုးနီလေးတွေ အတက်ပြန်ထွက်လာတယ်။ အဲ့ဒီအတက်လေးတွေကို လိုက်ဆိတ်ပြီးတော့ အချဉ်ရည်ပဲချက်စားစား၊ ကြော်ပြီးတော့ပဲစားစား အတော်စားလို့ကောင်းတယ်။ မိုးဖြိုင်ဖြိုင်ရွာရင်တော့ သန်သန်မာမာ ထွားထွားကျိုင်းကျိုင်း လယ်ကွန်စွန်းတွေ ခူးမနိုင်အောင် ပေါပါတယ်။ အရမ်းများလာရင်တော့ ၀က်စာအတွက်ခူးကျွေးကြတယ်။ မိုးဦးကျစမှာ ထွက်တဲ့ လယ်ကန်စွန်းက မန်ကျည်းသီးလေးနဲ့ အချဉ်ရည်ချက်စားလို့ ပိုကောင်းတယ်ဗျ။ အရမ်းမပေါသေးလို့လေ။ အရမ်းပေါလာရင် ကြော်စားရတာက ပိုကောင်းတယ်။ ဥ ဥတဲ့ ကန်စွန်းရွက်ကလည်း ချက်စားလို့ကောင်းပါတယ်။
ဒါလေးတွေကတော့ ကျွန်တော်တို့ရွာမှာ အစားများတဲ့ ဟင်းစားလေးများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သိပြီးသူများအတွက် ထပ်ပြီးမှတ်မိတာပေါ့။ မသိသေးသူများအတွက် ဗဟုသုတပေါ့ဗျာ။ ပုံမှန်စားနေကျ ဟင်းချက်နည်းများကို ငြီးငွေ့တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အမိမြန်မာပြည်ကို သတိရတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ် ဆီနည်းပြီး ထမင်းမြိန်စေတဲ့ အညာချက်လေးတွေ ချက်စားနိုင်စေလိုတဲ့ စေတနာနဲ့ ကျွန်တော်မှတ်သားမိသမျှလေးတွေ ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံး ဘေးရန်ကင်းကွာ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ…
စာရေးသူ ရှညောသား at Tuesday, April 26, 2011 Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ရွှေညာသားလေးရေ ပြန်ခါနီးပြီ စားရခါနီးပီဆိုပြီး တခုပြီးတခု ချက်ပြနေတော့
တာပဲ။ ပိတ်စွယ်ကို စလင်းဆင်ဖြူကျွန်း ဘက်နေတုန်းက မန်ကျည်းရွက်နဲ့ချက်ကျွေးတာစားဘူးတယ်။ အရမ်းကြိုက်တယ်။ ဂုံမင်းနဲ့ တူတယ်။ဂုံမင်းကိုသိ
လား။ အနံ့ တမျိုးလေးနဲ့ မွှေးတယ်။စားဘူးလား။ မျှစ်ထဲမှာဆိုယင်တော့ မျှစ်သုတ်နဲ့ မျှစ်ဆတ်ကိုအကြိုက်ဆုံး။ မျှစ်ဆတ်ကို ကိုယ့်ဟာကိုယ်လုပ်တာ။
ဆန်စေ့ဟင်းချိုတော့မကြားဖူးဘူးထင်တာပဲ။ ကျန်တာတွေလဲသိပ်မသိဘူး။ မန်ကျည်းရွက်နဲ့ အမဲခြောက်စပ်ချဉ်ချက်တော့ကောင်းကောင်းစားဘူးတယ်။
နွေရာသီကျောင်းပိတ်လို့ ရွာပြန်ယင်ကြီးကြီးက အဲဒါပဲအချက်များတယ်။
လယ်ကန်စွန်းရိုးနီကတော့ ချဉ်ဖတ်တည်တာလဲအရမ်းကောင်းတယ်။ ချဉ်ဟင်းချက်စားတယ်။
အင်းနော် အကိုကတော့ လုပ်ပြိ အဲဒါတွေ စားရဖို့ ဘယ်တော့လောက်များ မှပါလိမ့်နော်.....:):)
ကိုရွှေညာသားရေ ကျမတို့အညာကတော့ ပဒုမ္မာပင်လို့မခေါ်ဘူးဗျ။ ကျားရှာပင်လို့ခေါ်တယ်။ အပွင့်ခြောက်ကို သုပ်လဲစားတယ်၊ ငပိနဲ့လဲကြော်စားကြတယ်။ ကိုရွှေညာသားရဲ့ ဘလော့ကိုလာလည်ရင် ကျမတို့ရွာကို တအားသတိယတယ်။
jasmine>>>> တို့ ဆီက တောင်ပေါ်စာလေးတွေကိုလည်း စားဖူးသလောက်တော့ ကြိုက်ပါတယ်။ ခေါပုတ်၊ မုန့်ညှင်းချဉ်၊ စွန်တံ၊ ရှမ်းခေါက်ဆွဲ စတာတွေကိုတော့ အတော်လေးကြိုက်တယ်။ အညာအစားအစာလေးတွေလဲ စားဖူးအောင် ချက်စားကြည့်ပေါ့...:P:P:P
အစ်မ မယု>>>> ပြောတဲ့ ဂုံမင်းဆိုတာကိုတော့ မစားဖူးသေးဘူး....မျှစ်ဆတ်ကတော့ မိုးရာသီမျှစ်ပေါက်တဲ့အချိန်ဆိုရင် အိမ်မှာအမြဲလိုလို ရှိတယ်။ အိုးနဲ့စိမ်ထားတာလေ အိမ်ကတောထွက်တဲ့သူတိုင်းက မျှစ်လေးတွေပါပါလာတော့ မျှစ်ဆတ်ကတော့ မပြတ်ရဘူး....
khin>>>>> ပြောမှပဲ အပွင့်အခြောက်သုပ်စားရတယ်ဆိုတာ သိတယ်။ မှတ်ထားပြီး ရွာပြန်ရောက်ရင် သုပ်စားအုံးမှပါ။ နောက်လည်း ရွာအလွမ်းပြေ လေးတွေ လာပြီးအားပေးပါအုံးဗျာ....:P:P:P
အားလုံးပဲ လာလည်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီအညာဟင်းတွေက တစ်မျိုးပါလား...မစားဖူးသေးတာတွေ တော်တော်များနေတယ်...အညာသားမျက်စိလည်သွားတဲ့ အညာဟင်းတွေကို စိတ်ကူးပေါက်ရင် ချက်စားကြည့်ရမယ်...
ကျွန်မက အမေအထက်သူနဲ အဖေအညာသား ကမွေးတာမိုလား မသိဘူး အညာစာလဲ ကြိုက် ၊ ဆီတိုဟူး၊ ဟင်းလှော် ၊ ဟင်းပေါင်း အထက်စာ လဲစားတတ်တယ် ။ ကြည့်ပီးတော့ ငယ်ငယ်ကနွေရာသီသွားနေရင် စလင်းက အဖွား ချက်ကျွေး ဒါတွေ သတိရ လိုက်တာ။ thkq for ur anyarsar photos.
Oh my god,My mouth is watering when I look at this post. It has been overadecade not having those dishes. Thanks for the post Shwe Nyar Thar.
အညာဟင်းလေးတွေလာဖတ်ရင်း သွားရည်ယိုရသလို မြန်မာပြည်ကိုလည်းလွမ်းသွားရတယ်။
အညာဟင်းလေးတွေစားချင်လိုက်တာ ပထမဆုံးအကြိမ်လာလည်ပြီးလင့်လည်းချိတ်သွားပါတယ်နော်း)